एमेरीले कसरी आर्सनललाई चुपचाप इपिएलको दाबेदार बनाउँदैछन? - सबै खेल
२३ आश्विन २०७५, मंगलवार २०:४४ October 9, 2018 निर्वान झापाली	0 Comments arsenal, Aubameyang, Emery, Lacazette, Ozil, Toriera
यो सिजन इंग्लिस प्रिमियर लिग (इपिएल)मा तीन क्लबबिच मात्र प्रतिस्पर्धा हुने अपेक्षा गरिएको थियो – म्यान्चेस्टर सिटि, लिभरपुल र चेल्सी । म्यान्चेस्टर युनाइटेड पनि उपाधी होडमा आउन सक्थ्यो तर सिजनको सुरुवातबाटै युनाइटेडमा निराशाजनक वातावरण हाबी हुन थालिसकेको थियो ।
यता सबैको अपेक्षा विपरीत आर्सनलले सबै प्रतियोगिताका पछिल्ला ९ खेलमा शतप्रतिशत जित निकाल्दै लिगको चौथो स्थानमा पुगेर चुपचाप दाबेदारी प्रस्तुत गरेको छ । अहिले आर्सनल शीर्ष ३ टिम म्यान्चेस्टर सिटि, चेल्सी र लिभरपुलभन्दा केबल दुई अंकले मात्र पछाडि छ ।
गत अगस्टमा म्यानचेस्टर सिटि र चेल्सीसँग पराजित भएयता आर्सनल अपराजित छ । क्लबको पछिल्लो फर्म देखेर आर्सनलका फ्यानहरु एकपटक फेरि लिग जित्न सकिएला कि भनेर सपना देख्न थालिसकेका छन । आर्सेन वेंगरको पालामा आर्सनल फ्यानहरु केबल चौथो स्थानभित्र अँटाउने सपना देख्थे भने एकाध साना कप र शिल्ड जित्दा संसार जितेझैं खुशी हुन्थे ।
अब लिभरपुलका ‘डेड्ली ट्रीओ’ र म्यान्चेस्टर सिटिमा आक्रामक फुटबल खेल्नसक्ने खेलाडीको घुइँचोको मात्र होइन आर्सनलका ‘डेड्ली डुओ’को पनि चर्चा गर्ने बेला आएको छ !
उनाइ एमेरी, एकदमै तिक्ष्ण ट्याक्टिसियन हुन । उनी छोटो समयमै आर्सेन वेंगरले छोडेको टिममा यसरी प्रभाव जमाउन सफल भए कि अहिले आर्सनलले इपिएलका तीन प्रबल दाबेदारलाई कठिन चुनौती दिन सक्ने ल्याकत बनाएको छ ।
एमेरीले आर्सनललाई फेरि एकपटक इपिएलको पावर हाउसको रुपमा स्थापित गर्न सक्नुको कारण केके हुन त?
‘द टोरेरा इफेक्ट’
आर्सेन वेंगरको कार्यकालको पछिल्ला सिजनमा आर्सनल फ्यान आर्सनलले ट्रान्सफर मार्केटमा गतिला खेलाडी भित्र्याउन असफल हुँदा दिक्क थिए । सेन्ट्रल डिफेन्डर होस या भरपर्दो मिडफिल्डर वा स्तरिय गोलकिपर, आर्सनललाई जे को चरम आवश्यकता थियो आर्सनल तिनै खेलाडी अनुबन्ध गर्न सधैं असफल रहने गर्थ्यो।
तर, एमेरीले आर्सनल सम्हाले लगत्तैको पहिलो ट्रान्सफर मार्केटमै त्यो समस्याको समाधान गरिदिए । आर्सनलको सञ्जिवनी बुटी बनेर आए लुकास टोरेरा । सिरि-ए क्लब साम्पडोरियामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका टोरेराले विश्वकपमा उरुग्वेको मिडफिल्ड एक्लै सम्हालेका थिए । विश्वकपमा पोर्चुगलविरुद्धको खेलमा डिफेन्सिभ मिडफिल्डको रुपमा मैदानमा उत्रिएका टोरेराले एक्लै रोनाल्डोलाई निस्तेज बनाए । उनको क्षमता बुझ्न त्यो एक खेल नै काफी थियो ।
एमेरीले टोरेरालाई आर्सनलमा आबद्ध हुनासाथ मैदानमा पूरा समय बिताउन दिएनन । एमेरीले उनलाई आर्सनलको खेल शैली र वातावरण बुझ्न केही समय दिए । तर, जब उनीमाथि भरोसा गर्दै एमेरीले फुल टाइम खेल्ने मौका दिए आर्सनलको मिडफिल्ड फेरि उस्तै रहेन । टोरेराले एमेरीको भरोसाको सम्मन हुने खेल प्रस्तुत गरिरहेका छन ।
आइतबार भएको फुलह्यामविरुद्धको खेलमा टोरेराले एक्लै ६ पटक विपक्षिका सटिक पास रोके भने ८ पटक विपक्षिबाट बल खोसे । उनले गरेका ती ‘इन्टरसेप्सन’ र ‘रिकभरी’ सो खेलमा आर्सनलका कुनैपनी खेलाडीले गरेकोभन्दा धेरै हो । उनी मिडफिल्डमा आत्मविश्वासका साथ बल नियन्त्रण गरिरहेका देखिन्थे ।
आक्रामक स्ट्राइकर जोडी
आर्सेन वेंगरले आफ्नो अन्तिम सिजनसम्म आर्सनलको डिफेन्समात्र होइन आक्रमण पनि बलियो बनाउन सकेनन । तर, अन्तिम सिजनको सुरुवातमा उनले लियोनबाट ल्याएका अलेक्जेन्डर लाकाजेट र विन्टर ट्रान्सफरमा डर्टमन्डबाट आएका पिएरे एमरिक औबामेयाङ अहिले भने आर्सनलको ‘आर्सनल’का दुई मुख्य हतियार भएका छन । अहिले एमेरी वेंगरले अनुबन्ध गरेका दुई स्ट्राइकरको भरपुर सदुपयोग गर्दै गोलमाथी गोलको वर्षा गरिरहेका छन ।
दुवै खेलाडी अहिले राम्रो फर्ममा छन र इपिएलका हरेक प्रतिस्पर्धामा आर्सनलको अट्याक थप धारिलो बनाइरहेका छन । लाकाजेटले यो सिजन समग्रमा ५ गोल र ३ असिस्ट गरिसकेका छन भने औबामेयाङले ६ गोल र १ असिस्ट गरेका छन ।
फुटबल फ्यान र फुटबल पण्डितहरु इपिएलमा लिभरपुलका खुंखार तीन स्ट्राइकर सलाह, माने र फिर्मिनो तथा सिटिसँग आक्रामक फुटबल खेल्न खेलाडीको कमि नरहेको मात्र चर्चा गर्छन । तर, अब लिभरपुलका ‘डेड्ली ट्रीओ’ र म्यान्चेस्टर सिटिमा आक्रामक फुटबल खेल्नसक्ने खेलाडीको घुइँचोको मात्र होइन आर्सनलका ‘डेड्ली डुओ’को पनि चर्चा गर्ने बेला आएको छ । किनकी मेसुट ओजिल, हेनरिख म्खितारियन, ड्यानी वेलबेक, आरोन राम्जी र एलेक्स इओबीजस्ता खेलाडीले मिडफिल्डमा रचेको चक्रव्युहमा विपक्षी डिफेन्डर अलमल्याएर लाकाजेट र औबामेयाङले गोल गर्न थालिसकेका छन ।
यदि आर्सनलले अहिलेको फर्म, खेल र आत्मविश्वास सिजनको अन्त्यसम्म पनि कायम राख्न सक्यो भने आर्सनल पछिला सिजनहरुमा जस्तो मध्यक्रमका टिमहरुको पोइन्टको सम्भावित श्रोत रहनेछैन ।
बल गुमाउने हैन घुमाउने रणनिती
आर्सनलले यो सिजन इपिएलको सुखद सुरुवात गर्न सकेन । सुरुवाती दुई खेलमा म्यानचेस्टर सिटि र चेल्सीसँग खेल्दै दुवैमा पराजित भएको आर्सनलले हारका बावजुद एउटा राम्रो संकेत भने देखाएको थियो । एमेरी विपक्षी जतिसुकै बलियो र आक्रामक किन नहोस आफ्नो रणनितिबाट विमुख नभई आत्मविश्वासका साथ खेलाडीलाई आफ्नो भुमिका निभाउन प्रेरित गरिरहन्छन । सिटिसँगको खेलमा आर्सनलले एकदमै डिफेन्सिभ फुटबल खेल्यो । आक्रमण गर्दा गोल हुने सटिक सम्भावना नदेखे आर्सनल बरु ब्याक पास गरेर भएपनि बल गुमाउनुको सट्टा घुमाइ घुमाइ आफ्नै पकडमा राख्न प्रयासरत देखिन्थ्यो । त्यस्तो गर्दा केही मिसपास भएर पिटर चेकले झण्डै केही सिल्ली गोल पनि खाएका थिए । तर, एमेरी त्यस्ता गल्तिले विचलित नभई खेलाडीलाई थप आत्मविश्वासका साथ त्यस्तै खेल खेल्न बाहिरबाट प्रेरित गरिरहेका देखिन्थे । चेल्सीविरुद्धको खेलम पनि त्यस्तै दृष्य देख्न पाइन्थ्यो ।
तर, पछिल्लो समय आर्सनलका खेलाडी आत्मविश्वासी देखिएका छन । आर्सनल फेरि आफ्नो वास्तविक लयमा देखिन थालेको छ । कुनैबेला ‘सट’ र सटिक पास आर्सनलको विशेषता थियो । अहिले आर्सनल त्यस्तै देखिन थालेको छ । यद्यपि, फुलह्यामविरुद्धको खेलमा नाचो मोनरिएलले सट पासमा गल्ती गर्दा आन्द्रे शुरलेले फुलह्यामका लागि बराबरी गोल फर्काएका थिए ।
फस्ट हाफमा मात्र आर्सनलले आफ्नो पोस्टको आसपास २५ पटक मिसपास खेलेको थियो । इपिएलको इतिहासमा एकै खेलको कुनै एक हाफमा गल्ती गरिएको यो दोस्रो बढि पटक हो । तर, दोस्रो हाफमा सट र सटिक पास खेल्दै आरोन राम्जीले सुन्दर गोल गरे । आर्सनलले आफ्नो डिबक्स छेउबाट ल्याएको बल केबल ८ सटिक पास खेल्दै सुन्दर ‘ब्याकहिल फ्लिप’ गरेर राम्जीले गोलमा परिणत गराएका थिए ।
वाइड पास र विंगको सदुपयोग
अघिल्ला सिजनको दाँजोमा यो सिजन आर्सनलको खेल धेरै आक्रामक छ । यसको पुष्टी विंगबाट विपक्षीको डि-बक्समा आएका क्रसको संख्याले नै प्रस्ट्याउँछ । यो सिजन आर्सनलका खेलाडीले विपक्षीको डिबक्समा ९२ वटा क्रस निकालेका छन । गत सिजन यो संख्या ८१ थियो । तीमध्ये ३ क्रसलाई आर्सनलले गोलमा परिणत गर्न सफल भएको छ । आर्सनल इपिएलमा यो सिजन क्रसमा बढी गोल गर्ने टिमको सुचीमा संयुक्त रुपमा तेस्रो स्थानमा छ ।
इओबी, वेलबेक र मुस्ताफीले विपक्षीको डिबक्समा आफुले पाएका क्रसमा गोल गरेका थिए । क्रसमा आर्सनलभन्दा बढी गोल गर्ने टिममा बर्नले, न्युक्यासल, वाटफोर्ड, टोटेनह्याम र एभर्टनमात्र रहेका छन ।
आर्सनलले ‘आर्सनल’ जस्तो खेल्नु
सुरुका दुई खेलमा म्यानचेस्टर सिटी र चेल्सीसँग पराजित भएपछि गत सिजनको अन्त्य जस्तो निराश मनस्थितिमा गरेको थियो, आर्सनल यस सिजनको सुरुवातमा पनि झण्डै त्यस्तै मनस्थितिमा पुग्न लागेको थियो । तर, आर्सनलको त्यसपछिका फिक्स्चरले निराशा कम गर्‍यो ।
वेस्ट ह्याम, कार्डिफ सिटी, न्युक्यासल, एभर्टन, वाटफोर्ड र फुलह्यामविरुद्धका खेल सकिइसकेका छन । आर्सनलले ति हरेक खेलबाट खेलबाट पूर्ण ३ अंक हात पार्न सफल भयो । तर, यसअघिका सिजन यिनै क्लबहरुसँगको प्रतिस्पर्धामा आशातित नतिजा निकाल्न धेरै मुश्किल थियो । गत सिजन आर्सनलले स्वानसी, ब्राइटन, बर्नमाउथ, वाटफोर्ड र स्टोकजस्ता टिमसँग हारेको थियो । आर्सनल यी टिमहरुलाई सजिलै पराजित गर्नसक्ने स्तरको क्लब हो ।
इपिएलमा यदि यस्ता मध्यक्रमका टिमहरुसँगको खेल जित्न सकियो भने शीर्ष चारमा अँटाउन सहज हुन्छ भने शीर्ष ६ टिमविरुद्धका खेलमा आउने पोइन्ट बोनस वा सो सरह हुन्छन ।
यदि आर्सनलले अहिलेको फर्म, खेल र आत्मविश्वास सिजनको अन्त्यसम्म पनि कायम राख्न सक्यो भने आर्सनल पछिला सिजनहरुमा जस्तो मध्यक्रमका टिमहरुको पोइन्टको सम्भावित श्रोत रहनेछैन । यस्तै भइरहे आर्सनल इपिएल उपाधीको प्रबल दाबेदारको रुपमा उदाउने छ । आर्सनलले काँचुली फेर्ने छ ।
← प्रदीप, सन्दीप र ललितको उत्कृष्ट प्रदर्शनमा नेपालको लगातार चौथो जित, भुटान ३३ रनमै अलआउट
चीनविरुद्ध स्पिनर हावी, नेपाल ११ बलमै विजयी →
कोरोना पीडितलाई नेमारले दिए ५ मिलियन ब्राजिलियन रियाल
२१ चैत्र २०७६, शुक्रबार १८:४८ शंकर लामिछाने 0
२ आश्विन २०७६, बिहीबार १६:२३ महेश कार्की 0